PressReader - Isolezwe: 2017-10-12 - UMaponya ugqugquzele intsha ukuba izimele
UMaponya ugqugquzele intsha ukuba izimele
INGQALABUTHO kwezamabhizinisi uDkt Richard Maponya igqugquzele osomabhizinisi abancane ukuthi bangasabi ukungena kwezamabhizinisi ngoba yiyona ndlela yokudala amathuba omsebenzi, ukuqeda ububha nokuthuthukisa umnotho.
UMaponya uthe akufanele intsha ifundele imisebenzi ethile bese ilinda ukuqashwa ngoba lokhu ngeke kuthuthukise umnotho wezwe kodwa into ezodala amathuba omsebenzi wukusungulwa kwezinkampani.
Ekhuluma emcimbini wokwethulwa kweMyGrowthFund (MGF) okuyinhlangano eyethulwe ngeledlule ngusomabhizinisi odume ngezinkulumo ezakhayo, uMnuz Vusi Thembekayo, uMaponya uveze ukuthi uyinxusa lale nhlangano ezothuthukisa osomabhizinisi abamnyama.
UThembekwayo uveze ukuthi iMGF izoxhasa osomabhizinisi abamnyama ngemali, icathule nabo ukuqinisekisa ukuthi amabhizinisi abo ayathuthuka.
UMaponya uthe ukhethe ukuba yinxusa leMGF ngoba ihambisana nemibono yakhe.
“Ngizimisele ukweseka inhlangano ezothuthukisa abantu abamnyama nomnotho wezwe ngokuvula amathuba. Okungijabulisayo wukuthi izosiza osomabhizinisi ngamakhono adingekayo ukuze bakhulise izinkampani zabo, ibanike amakhono obuchwepheshe besimanje ukuze bengawi emuva kweminyaka embalwa,” kusho uMaponya.
Uthe uzofundisa osomabhizinisi abancane konke akufundile nalokho okuholele ekutheni aqale enezitolo agcine esenamabhizinisi emikhakheni ehlukene okubalwa owokuthuthukisa ingqalasizinda.
UThembekwayo usebamemezele osomabhizinisi abangu-40 abazoqeqeshwa izinyanga ezingu-18 ngaphansi kohlelo lweMGF.
Abangu-40 abaqokiwe bakhethwe ohlwini lwezicelo ezingu-3 000 ebezifuna ukungena kulolu hlelo.
“Osomabhizinisi abafake izicelo bekucaca ukuthi abadlali futhi benza umsebenzi oncomekayo kodwa bekufanele ngikhethe abangu-40 abasemikhakheni ehlukene. Bengidinga osomabhizinisi abenza u-R1 million kuya ku-R39 million ngonyaka abasemkhakheni wemfashini, owemithi, owonjiniyela, owezemfundo, owokwakha, owobuchwepheshe besimanje neminye,” kusho uThembekwayo.
Ezinyangeni ezingu-18 ezizayo uThembekwayo uthe osomabhizinisi bazofundiswa ukuphatha imali, ukungena ezimakethe ezidayisa imikhiqizo yabo, wukuphatha abantu, ukugqugquzela abasebenzi nokuthuthukisa amakhono abantu ukuze bathuthukise inkampani.
Ukuthola eminye imininingwane ngalolu hlelo abantu bangaya ekhasini elithi www.mygrowthfund.co.za noma balandele uThembekwayo ezinkundleni ezihlukene zokuxhumana.
OSOMABHIZINISI abazoba sohlweni lweMGF bazothola ithuba elingandile lokuncela ulwazi kumakadebona kwezamabhizinisi uDkt Richard Maphonya lapha uthathwe noMnuz Vusi Thembekwayo ongumsunguli weMGF